Sharciyada Kirchoff: xeerarka aasaasiga ah ee noodhka korantada | Qalabka bilaashka ah
Sharciyada Kirchhoff: qawaaniinta aasaasiga ah ee node ee wareegyada korantada
Isaac | | Qaybaha elektarooniga ah, waxbarashada, General
Sida Sharciga Ohm, las Sharciyada Kirchhoff Iyagu waa sharci kale oo ka mid ah xeerarka aasaasiga ah ee korantada. Shuruucdani waxay noo oggolaanayaan inaan falanqeyno korantada iyo xoogga hadda ku jira barta, wax muhiim u ah in la ogaado dhinacyada wareegyada.
Marka hadaad rabto wax yar ka ogow iyaga, Waxaan kugu martiqaadayaa inaad sii wadato aqrinta casharkaan oo dhan oo ku saabsan isleegyada aasaasiga ah iyo codsigooda ee wareegyada aasaasiga ah ...
1 Noodhka, laanta, mesh
2 Sharciyada Kirchhoff
2.1 Sharciga koowaad ama noodhadhka
2.2 Sharciga labaad ama mehesho
Noodhka, laanta, mesh
Markaad falanqaynayso wareegga waxaad kala saari kartaa calaamadaha kala duwan ee canaasiirta, khadadka isku xidhka, isku xidhka, iyo sidoo kale burooyinka. Kuwa dambe ayaa sidoo kale loo yaqaan laan ama mesh.
Sharciyada Kirchhoff waxaa loo isticmaalaa in lagu falanqeeyo guryaha korontada noodhadhkan. Taasi waa, barta isgoyska halkaasoo ay labo ama ka badan cunsur isku xiran yihiin. Tusaale ahaan, sida barta aad ku arki karto sawirka guud ee maqaalkan ...
ka Sharciyada Kirchhoff Waa laba isleeg ama isleeg oo salka ku haya mabaadi’da ilaalinta tamarta iyo soo-wareejinta wareegyada korantada. Labada sharciba waxaa lagu heli karaa si toos ah iyadoo la keenayo isleegyada caanka ah ee Maxwell, in kasta oo Kirchhoff uu tan ka horreeyay.
Magacoodu wuxuu ka yimid daahfurehooda, tan iyo markii lagu sharraxay markii ugu horreysay 1846 Gustav Kirchhoff. Haatanna si ballaaran ayaa loogu adeegsadaa injineernimada koronto iyo elektiroonig si loo ogaado korantada iyo hadda ku jirta qanjidhada wareegga, oo ay weheliso Sharciga Ohm, waxay sameeyaan qalab wax ku ool u ah falanqaynta.
Sharciga koowaad ama noodhadhka
«Meel kasta oo ay tahay, wadarta aljebrada ee xoojinta soo galaysa node waxay u dhigantaa wadarta algebraic ee xoojinta ka tagaysa Si isku mid ah, wadarta dhammaan durdurrada iyada oo loo marayo guntinta ayaa u dhiganta eber.»
I = aniga1 + Aniga2 + Aniga3…
Sharciga labaad ama mehesho
«Wareeg xiran, wadarta dhammaan dhibcaha danabku waxay la mid yihiin wadarta korantada la bixiyo. Si isku mid ah, wadarta aljebrada ee kala duwanaanshaha korantada ee wareegga ayaa u dhiganta eber.«.
-V1 +V2 +V3 = I R1 + I R2 + I R3 = I (R1 + R2 + R3)
Hadda waxaad bilaabi kartaa inaad codsato kuwan qaaciidooyin fudud si aad u hesho faahfaahinta hadda iyo danab ee wareegyadaada ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » waxbarashada » Sharciyada Kirchhoff: qawaaniinta aasaasiga ah ee node ee wareegyada korantada
Tilmaamaha degdegga ah: Koodhka midabka iska caabinta
OSMC: xarunta multimedia ee loo yaqaan 'Raspberry Pi'